Shiinaha Blueberry, blackberry, mulberry, strawberry, raspberry, bayberry cas, mashiinka wax lagu karsado iyo warshad soo -saareyaasha soo saaraha | BOOD
Blueberry, blackberry, mulberry, strawberry, raspberry, bayberry cas, mashiinka wax lagu karsado iyo khad wax soo saar
Blueberry, blackberry, mulberry, strawberry, raspberry, bayberry gaduudan, mashiinka wax soo saarka karamberiga iyo khadka wax soo saarka ayaa soo saari kara casiir cad, casiir turbid, xoog saar casiir, budada miraha, macaanka miraha iyo badeecooyin kale.
Blueberry, blackberry, mulberry, strawberry, raspberry, bayberry cas, mashiinka wax lagu karsado iyo mashiinka wax soo saarku waxay soo saari karaan casiir cad, casiir turbid ah, xoogaa casiir ah, budada miraha, macaanka miraha iyo alaabooyinka kale. , mashiinka hubinta, juicer kiishka hawada, haanta enzymolysis, decanter, ultrafilter, homogenizer, mashiinka degassing, mashiinka sterilization, mashiinka buuxinta, mashiinka caadiga ah iyo qaybaha kale ee qalabka. Khadka wax -soo -saarkan waxaa loogu talagalay fikrad horumarsan iyo heer sare oo otomaatig ah; Qalabka ugu muhiimsan waxaa dhammaantood laga sameeyey bir birta ka samaysan oo tayo sare leh, taas oo si buuxda u buuxisa shuruudaha nadaafadda ee habaynta cuntada.
Blueberry, blackberry, mulberry, strawberry, raspberry, bayberry-cas, mashiinka wax lagu karsado iyo mashiinka wax-soo-saarka: dhalada galaaska, dhalada caagga ah ee PET, zip-top can, xirmo jilicsan oo aseptic ah, kartoonka lebenka ah, kartoonka sare ee gable, 2L-220L bac aseptic ah durbaan, baakad kartoon, bac caag ah, qasacad 70-4500g.
Blueberry, blackberry, mulberry, strawberry, raspberry, bayberry -cas, mashiinka wax lagu karsado iyo farsamada laynka wax soo saarka:
Dooro alaab ceeriin ah oo cusub oo bisil oo biyo raaci laba jeer.
Midhaha darajada koowaad: midhaha cas ee cagaaran ≤ 5%, miro qurmay ≤ 5%, ka mid noqoshada ≤ 3%;
Midhaha dabaqadda labaad: midhaha cas ee cagaaran ≤ 6%, miro qurmay ≤ 8%, ka mid noqoshada ≤ 5%.
Tilmaamaha jirka iyo kiimikada: waxa ku jira sonkorta ≥ 0.04g / ml, wadarta aashitada ≥ 25g / kg, asiidh kacsan ≤ 3 × 10-4g / ml.
Nadiifinta: ka hor intaanay miirmin, waa in casiirka si fiican loo nadiifiyaa oo qaybaha qudhmay iyo kuwa caaryaysaniba la saaraa. Sababtoo ah alaabta ceyriinka ah ayaa badanaa lagu cadaadiyey maqaarka, haddii aan la nadiifin, boodh iyo wasakh ayaa la soo gelin doonaa casiirka oo saameynaya tayada. Heerka ugu wanaagsan ee qulqulka qulqulka waa 20L / min-23l / min, iyo inta u dhaxaysa biiyaha iyo miraha waa 17cm-18cm.
Waxaa lagama maarmaan ah in la burburiyo casiirka ka hor intaan la tuujin si loo sameeyo geeddi -socodka burburka iyo cadaadiska si loo hagaajiyo dhalidda casiirka ee alaabta ceeriin ah.
Casiirka waxaa soo saaray cadaadis farsamo oo dibadda ah. Sida waafaqsan shuruudaha enzymolysis bioengineering iyo technology juicing, qalabka u dhigma naqshadeynta iyo xulashada qalabka ee soo saaridda casiirka iyo nidaamka kala -soocidda ayaa la fuliyay; iyo kaydin qabow ayaa loo dhisay si loo kordhiyo xilliga casiirka ee berry blueberry duurjoogta ah laga bilaabo 30 maalmood oo la mid ah xilliga qaadista (xilliga qaadista waa Luulyo iyo Ogosto sannad kasta), iyo illaa 45-60 maalmood oo shaqo, taas oo si weyn u wanaajisay heerka isticmaalka qalabka iyo faa'iidooyinka dhaqaale ee xaruntan wax -soo -saarka casiirka xoogga badan.
Ka saar walxaha aan qallafsanayn ama walxaha la laalay ee lagu daadiyay casiirka. Cabbirka daloolka shaandhada ayaa qiyaastii ah 0.5mm.
Pectin -ka ku jira casiirka ayaa casiirka ka dhigi doona mid qallafsan, marka lagu daro, wuxuu ilaalin karaa walxaha kale wuxuuna hor istaagi karaa caddeynta casiirka. Pectinase waxaa loo adeegsadaa in biyo lagu shubo pectin -ka casiirka miraha, si walxaha kale ee casiirka ku jira ay u waayaan badbaadinta pectin oo ay si wada jir ah u soo dedejiyaan si loo gaaro ujeeddada caddaynta. Guud ahaan, qiyaasta diyaarinta enzimku waa 0.2% - 0.4% tayada sharaabka miraha, heerkulkana waxaa lagu xakameeyaa 50 ℃ 3-4 h.
Ilaalinta midabka, dheef -shiid kiimikaad iyo madhalaysnimo
Miraha blueberry duurjoogta ah ayaa hodan ku ah qaybaha antioxidant VC, VE iyo β - carotene. Intaa waxaa sii dheer, waxay sidoo kale ka kooban tahay noocyo kala duwan oo anthocyanins dabiici ah oo biyo-ku milmi kara, kuwaas oo leh saameyn daaweyn aad u wanaagsan cudurro badan oo indhaha ah. Sidaa darteed, waxaa lagama maarmaan ah in la isticmaalo ilaalinta midabka iyo tikniyoolajiyadda ka -hortagga enzyme si loo kordhiyo haynta walxaha firfircoon ee geedi socodka. Madhalaysnimadu waa in la dilo jeermisyada si looga hortago halaagga, tan kale waa in la dhaqaajiyo hawlaha enzyme si looga hortago inay dhacaan isbeddello xun oo kala duwan. Heerkulka sare ee jeermis -dilaha ayaa la isticmaalay.
Sidan, waqtiga fiirsashada waa la soo gaabin karaa midabka iyo dhadhanka casiirkana waa la ilaalin karaa. Ka -fiirsashada ka dib, qaar iyaga ka mid ah ayaa la kaydiyaa oo loo iibiyaa casiir xoog leh, qaarna waxaa loo isticmaalaa cabitaannada nafaqada.
Hore: Canbaha, cananaaska, babayga, mashiinka wax -guava iyo khadka wax -soo -saarka
Xiga: Saytuunka, tubta, bayberry, miro guduud, abrikot, mashiinka wax lagu karsado iyo xariijinta wax soo saarka
Olive, tubta, bayberry, fersken, abrikot, pro tubta ...
Line -soo -saarka koollada yaanyo karti yar, fi ...